Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Man United… (Red Devils oo raadinaysa inay guuldarro la’aanteeda xiriirka ah sii wadato marka ay caawa booqanayso Brighton) – Gool FM
Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Man United… (Red Devils oo raadinaysa inay guuldarro la’aanteeda xiriirka ah sii wadato marka ay caawa booqanayso Brighton)
(Brighton) 30 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa diiradda saareysa sidii ay qeyb uga noqon lahayd kooxaha ku dhammaysta afarta sare ee horyaalka Premier League.
Man Utd ayaa caawa Kooxda Brighton & Hove Albion caawa ku booqanaysa garoonka the Amex Stadium.
Red Devils ayaa kulankii ugu dambeeyey waxa ay guul ka gaartay Norwich City waxaana ay noqotay kooxda ugu horreysay ee 30 jeer gaarta afar dhammaadka FA Cup-ka, laakiin waxa ay wajahaysaa kooxda Brighton oo aan dab yar shideynin.
Tababaraha Kooxda Brighton ee Graham Potter ayaa sheegay inuu eegi doono bal inuu Adam Webster taam u noqon doono kulankan kaddib markii uu dhaawac bowdada ka soo gaaray kulankii Leicester.
Tariq Lamptey ayaa laga yaabaa inuu sii wato ka ciyaarista booskiisa daafaca dambeedka midig kaddib qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee safashadiisii ugu horreysay uu ka sameeyey kulankii ay wajaheen Foxes.
Macallinka Kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa la filayaa inuu isbedel badan sameyso marka loo eego isbedelkii weynaa oo uu sameeyey kulankii ay guusha ka gaareen Norwich.
Phil Jones iyo Axel Tuanzebe waa labada ciyaaryahan kaliya ee aan la heli karin kulankan, kuwaasoo ka tirsan Manchester United.
>- Dhammaan shantii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay labadaan kooxood wada ciyaaraan waxaa guuleysanaysay kooxda garoonkeeda lagu ciyaarayey.
>- Man United ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay shan ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Man Utd ayaan la garaacin todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Brighton ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaarto 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Kooxda Man United ayaa dhaliyey ugu yaraan labo gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Brighton tartammada oo dhan.